Nepal - बलात्कारीसमेत नक्कली
बजारमा नक्कली सर्टिफिकेटको चर्चा व्यापक छ । नक्कली नागरिकता पनि व्यापकै छ भन्दा फरक पर्दैन । त्यस्तै नक्कली साबुन, नक्कली तेल, नक्कली सैम्पु, नक्कली औषधीबारे पनि हामीले सुनेकै हौँ । अब नक्कलीहरुको यो हूलमूलमा एउटा अर्को नक्कली थपिएको छ, नक्कली बलात्कारी !
बजार त नक्कलीहरुले पूरै छोपिसकेको रहेछ । हुँदाहुँदा अब बलात्कारीसमेत नक्कली आउन थालिसक्यो । हालै मात्र कञ्चनपुरमा त्यस्तो नक्कली बलात्कारी पक्राउ परेको हो । कञ्चनपुरमा गत महिना एक चेली बलात्कारपछि हत्याको सिकार भएकी थिइन् । घटनाप्रति स्थानीय जनता आक्रोशित
भएपछि प्रहरीले एउटा बलात्कारी पक्राउ गर्‍यो । सबैका सामु सार्वजनिक पनि गर्‍यो । पछि थाहा भयो, उनी त नक्कली बलात्कारी पो रहेछन् ।
बजारमा नक्कलीहरुको कति ठूलो बिगबिगी छ भन्ने कुरा यसैबाट पनि थाहा हुन्छ । साबुन र सैम्पुसम्म नक्कली आउनु त ठीकै पनि होला । अब बलात्कारीसमेत नक्कली आउन थालिसक्यो भनेपछि बजार त खत्तमै भइसकेको रहेछ । गुणस्तर विभाग के हेरी बसेको छ हँ ? बजारमा यति खतरनाक नक्कली वस्तु आइरहेको छ, के यसमा गृह मन्त्रालयको मात्र आलोचना गरेर पुग्छ ? आलोचना त गुणस्तर विभागको पनि हुनुपर्छ । वास्तवमा कञ्चनपुरका जनता आक्रोशित हुनुको मुख्य कारण यही पो हो कि जस्तो लागेको छ । बलात्कार भनेको त बहुत गम्भीर अपराध हो । अब त्यहाँसमेत नक्कली घुसिसकेपछि को आक्रोशित हुँदैन र ?